Umqondiso | RayHaber | Uloliwe | Indlela enkulu | imoto cable
ikhayaRayHaber | Iindaba zendlela yoLoliwe oHamba ngeNdiza nohambotag
IConscious / Grantee
Umhleli oyiNtloko / uMhleli kwiNtloko
Levent Özen -nxibelelana @rayhaber.com
AbaHleli / abaHleli
Elventi Elmastaş - umhleli @rayhaber.com
Can Özen -nga @rayhaber.com
Umcebisi wezomthetho / iJurisconsult
Nguyise. I-Alper Fırat Depcı - alperdepmeci@hotmail.com
Umcebisi wezeMali / uMcebisi wezeMali
I-Necdet Ozen - ozennecdet@hotmail.com
Nyaka ngamnye, icandelo kaloliwe-high speed, Turkey i waqhubeka ekhula ukuba inkokheli eYurophu. Utyalo-mali kumzila wezitrotho, ezithatha isantya esivela kwizitroli eziphezulu, ziyaqhubeka zanda. Ukongeza kwi-investments eyenziwa kweso sixeko, ezininzi iinkampani zethu zokuvelisa zasekhaya zikhanya. Iqhayiya ukuba sele iqalile ukuveliswa kweTurkey ephakamileyo isitimela ın kunye ne-tram yasekhaya, izitimela ezilula kunye nabenzi bezithuthi ezisemagqabini. Sivuyiswa kakhulu kuba kuletafile eyazidlayo.
Sele sisebenza kunye ne-7 iminyaka emininzi njengentatheli enomdla nengakhethi buso. RayHaber Iwebhusayithi yethu ibe yindawo enkulu yeendaba ezithi zibambe umndilili weendwendwe ezizigidi ezili-50 ngosuku, kunye neendaba eziliwaka le-20, iindaba zemihla ngemihla zentengiso kunye ne-30 yojikelo lukaloliwe lonyaka. Injongo yethu kukuba ukususa 100 amawaka iindwendwe zethu zemihla ngemihla, isiza ranking kwisizwe angene site ukhwele yokuqala Turkey kaThixo.
Imarike yezitimela zaseTurkey Isantya siphakeme. Iinkampani zenkampani zenkampani. Ukongezwa kwizithuthi zendawo, i-LRT kunye neenqwelo zangasese, ezibizwa ngokuba "izitimela zikazwelonke". Kwakhona Siyavuya ukuba unyanisekile kule meko.
Sisebenzela ukuvelisa iindaba ezinokuvelisa izinto ezibonakala ngathi ziyimfihlo kwaye ziyiminyaka e-7. RayHaber iphepha lewebhu elineendaba ezingaphezulu kwe-50.000, iibhulethini zemihla ngemihla ze-bulletins kunye ne-20 iminyaka yesitimela yokufezekisa i-portal enkulu kunye neendwendwe ezizodwa ze-30.000 ngosuku. Eyona nto sijolise kuyo ziindwendwe ze-100.000 ngosuku kwaye ziya kuba kwiziza ze-1000 kuludwe lwewebhu lwehlabathi.
media: iiwebhu / iimagazini eziprintiweyo
Owadala: Uvavanyo lwe-01.12.2011 / 01.01.2011 buhlala
News: Iindaba ze-60.000, ividiyo ye-1700
iindwendwe: 30.000 enye / imini
RayHaber.com ithembisa ukuthobela imiGaqo-nkqubo yoNgcino loBugcisa kunye nawo onke amalungelo agciniweyo.
Iphepha lethu leendaba lipapashwa ngokuhambelana noMthetho Nomb. 5846 kwimisebenzi yobugcisa kunye nezobugcisa. Ukushicilela ngokutsha kunye nokupapasha iindaba ezifunyenwe kwiiarhente kulo naliphi na eliphakathi kufuna imvume ebhaliweyo kwangaphambili ngokomgaqo-nkqubo weearhente ezifanelekileyo. RayHaberamanye amanqaku kunye namanqaku epapashwe kwi RayHaberinokupapashwa kwakhona ngaphandle kokuba ikhonkco linikezwe kwiphepha elinxulumene nalo .com. RayHaberAbabhali baxanduva lwamanqaku kunye nezimvo ezipapashwe kwi .com.
Iindaba Zethu Zolwazi
Indawo yethu ayithathi cala kwaye yazisa kuphela abafundi bayo malunga neziganeko kunye neziganeko ezindabeni eziwapapasha kwaye ziyaqhubeka nokupapasha. Ijolise ekucaciseni nasekuboniseni abafundi bayo ngaphandle kokonzakala. RayHaberUmxholo ethunyelwe .com 100% ipapashwa ngokungqinelana nemithetho yeRiphabliki Turkey, kuyo yonke imini- iintlobo imifanekiso, ulwazi, kunye neendaba ezivela kumnini copyright itekisi ashicilelwe kokufumana imvume ebhaliweyo.
RayHaber.net yamkele ukuhlonipha umthetho, imithetho, amalungelo obunini kunye namalungelo obuqu. Indawo yethu isebenza 'njengomnikezeli womxholo' njengoko kuchaziwe kumthetho we-5651. Ngokomthetho ofanelekileyo, ukuphathwa kwesiza akunyanzelekanga ukuba kulawulwe imixholo engekho mthethweni. Ke ngoko, indawo yethu sele yamkele umgaqo 'wokulumkisa nokususa'. Imibutho yabanamalungelo, abarhanela ukuba yinyani yeendaba eziphazanyiswayo naziphi na iindaba nabakholelwa ukuba imisebenzi ethathwe kwi-COPYRIGHT kwabelwana ngayo ngokungekho mthethweni kunye namalungelo ezomthetho aphulwe,Rayhaber.com idilesi yemeyile okanye IFOM YOQHAGAMSHELWAYO. Igqwetha lakho liza kuphonononga izikhalazo zakho kunye nezicelo kunye neziqulatho ezicingelwa ukuba zokwaphulwa ziya kususwa kwiwebhusayithi yethu kwangoko.
Umgaqo-nkqubo weNgcaciso / iMgaqo-nkqubo
© Copyright 2018 RayHaber.com onke amalungelo agciniwe. Iikopi zazo zonke iintlobo zomxholo njengekhowudi, iindaba, imifanekiso, udliwanondlebe RayHaber.com. RayHaberOnke amanqaku, izixhobo, imifanekiso, iifayile zokumamela, oopopayi, iividiyo, uyilo kunye nolungiselelo kwindawo ye .com ikhuselwe ngumthetho welungelo lokushicilela i-5846. la RayHaber.com ayinakotshwa, isasazwe, iguqulwe, ipapashwe nangayiphi na indlela ngaphandle kwemvume ebhaliweyo ye .com. Ikopi kunye nokusebenzisa akunakwenziwa ngaphandle kwemvume kwaye ngaphandle kokuchaza umthombo.
RayHaberAmakhonkco angaphandle kwi .com avule kwiphepha elahlukileyo. Ababhali banoxanduva lwamanqaku ashicilelweyo kunye nezimvo. RayHaber.com inokutshintsha nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. Asinaxanduva lwazo naziphi na iimpazamo ezibangelwa lwazi kule ndawo.
Ulwazi lwakho siya kulugcina luyimfihlo. Ngokubanzi, siya kusebenzisa ulwazi lwakho ngaphakathi RayHaberI thelekisa. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha RayHaber.com isebenzisa umntu wesithathu ekuqhubeni ulwazi lwakho. RayHaber.com ifuna la maqela wesithathu athobele ngqo imiyalelo yayo kwaye RayHaber.com ifuna ukuba bangasebenzisi iinkcukacha zakho. Xa unxibelelana RayHaber.com ngamanye amaxesha sifumana ulwazi lomntu ngawe. Umzekelo, ukuba usibhalela okanye usibhalisela ileta yeendaba, ungasixelela ukuba ungubani, singanxibelelana njani nawe nokuba ucinga ntoni. Xa usebenzisa RayHaber.com Iinkonzo ze-Intanethi, sisebenzisa ikuki kwaye siqokelela iidilesi ze-IP. Ungafumanisa ngakumbi ngale nto kwi RayHaber.com Iicookies icandelo loMgaqo-nkqubo wethu wabucala.
Zonke izixhumanisi zangaphandle kwindawo zivulekile kwiphepha elahlukileyo. RayHaber.com ayithwali xanduva lonxibelelwano lwangaphandle.